Kolotsaina: Vitsy ny Boky Atonta eto Madagasikara | mandimby maharo
Posted on 29 April 2014 1 May 2014 by Mandimby Maharo
23 Aprily, andro iraisam-pirenena ho an’ny Boky. Tsenabe ny Boky ny nentina nanamarihana izany teto Madagasikara. Izany dia nokarakaran’ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy sy ny fikambanan’ireo mpanota boky eto Madagasikara ny 22-25 Aprily lasa teo. Andiany fahafolo ity nokarakaraina ity ary teo amin’ny zaridainan’Antaninarenina, toy ny isan-taona ihany, no nanaovana azy.
Tranoheva 14 no nandrafitra ity tsenabe ity, izay nandraisan’ireo mpanota boky, mpivaro-boky, tranomboky sy ireo rehetra misahana ny asa fanontana sy fampielezana boky eto Madagasikara. Isan’ireo nandray anjara ny Edition Ambozontany, ny Librairie Mixte, ny masoivohon’ny Etazonia, ary mazava ho azy fa isan’ireo nibahana toerana ireo mpvaro-boky kristiana. Nisy ny fivarotana araka ny maha tseana azy, fa isan’ireo nahasarika olona be koa ny zoro izay natokana indrindra hamakiana boky. Raha ny tombana dia 200 isan’andro ireo namaky boky tamin’ity toerana ity. Tsy nifidy dokajin-taona sy sokajim-boky novakiana izany fa hatramin’nt zaza vao mahay mamaky teny ka hatramin’ny lehibe nahazo taona dia voasarika avokoa. Nisy rahateo fotoana natokana hamakiana boky miaraka ho an’ny ankizy.
Isan’ireo mpanentana amin’ny famakiamboky ny Lions Club sy ny Fondation Telma. Amin’ny alalan’ny fitetezam-bohitra itondrana ny Biblio Bus no anatanterahany izany.
Ity hetsika ity dia manana tanjona ny hampirisika ny malagasy hamaky boky. Tsapa manko fa mihena ny fitiavan’ny malagasy mamaky boky. Mihena toy izany koa ny fanontana boky eto Madagasikara satria dia 119 monja ny karazam-boky nantonta teto an-toerana tamin’ny taona 2013. Raha hoarina amin’ny any ivelany ohatra dia 9 isan’ora no karazam-boky voatonta ny any Frantsa. I Etazonia kosa no mpivarotra boky be indrindra eto an-tany satria dia 751.729.000 raha ny taona 2010 monja.
Fantaro koa fa ny Baoboly no boky be mpividy indrindra(900 tapitrisa): i Agatha Christie no mpanoratra nahalafo boky be indrindra(2 lavitrisa): i K. Rowling mpanoratra ny Harry Potter kosa no mpanoratra manankarena indrindra ary ny “Le Petit Prince” nosoratan’i Saint-Exupéry no boky teny frantsay be mpividy indrindra.RAha ny eto Madagasikara dia ny Baiboly no be mpividy indrindra, ankoatr’ireo boky ampiasaina any an-tsekoly.
Loharanom-pahalalana ny boky ka isan’ny hetsika tsara tohizana ity hetsika ity. Ny tsapa manko dia malaina ny handray anjara amin’izany ireo mpisehatra amin’izany fampiroborobona ny vaky boky. Ampirisihana koa ny hamakiana boky any amin’ireny tranom-boky maro samihafa ireno?
Tags: MadagasikaraCategories: Culture, societé